Otu esi eji mmemme ndị a n'efu mee ka vidiyo dị mfe | Nzukọ mkpanaka
Otu esi eji mmemme ndị a n'efu eme ka vidiyo na -enwu gbaa
Ignacio Sala | | Mmemme
Dika teknụzụ achọpụtara n'ime smartphones etolitela, ngwaọrụ a abụrụla ezigbo nnọchi maka igwefoto vidiyo ọdịnala na kọmpụta dijitalụ kọmpat. Agbanyeghị ka ọ dị ha nwere ụkọ nke ha enweghị ike ịnye ugbu a: mbugharị ngwa anya.
Ekele maka mmalite nke smartphones, ọ dị ngwa ngwa ma dịkwa mfe idobe oge anyị kacha amasị, agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ọsọ ọsọ bụ ndị ndụmọdụ ọjọọ na vidiyo anyị dekọrọ anaghị azaghachi ọnọdụ mbụ, ma ọ bụ n'ihi na ọ naghị elekwasị anya, gbara ọchịchịrị, edere ya kwụ ...
Ọ bụrụ na edere vidiyo a ka ọ kwụ ọtọ, anyị nwere ike iji ngwa dị iche iche na -enye anyị ohere mfe tụgharịa vidiyo. Ọ bụkwa otu ihe ahụ maka vidiyo agbagburu gbara ọchịchịrị.
Otú ọ dị, mgbe edekọtaghị vidiyo nke ọma na mgbado anya, teknụzụ taa anaghị arụ ọrụ ebube, yabụ na ọ dịghị mkpa inye nsogbu ịchọ ngwa na -enyere anyị aka n'echiche a.
Top 3 Alternatives ka VideoScribe
Ọ bụ eleghị anya na -eme n'ọdịnihu na -eji ojiji Nzuzu nke artificial, nke a nwere ike ịmata ihe ndị na-adịghị elekwasị anya na inye ha ọdịdị, dịka a na-eme taa na onyonyo nke mkpebi mbụ ya pere mpe nke na-enye ohere ịbawanye nha ya, na-enye nsonaazụ ka mma karịa nke mbụ.
Dozie vidiyo, Ọ bụ usoro dịtụ mfe nke anyị nwere ike iji ihe ngwa ọ bụla na -enye anyị ohere idezi vidiyo. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ma ngwaọrụ ịchọrọ yana ngwa kachasị mma iji rụọ ọrụ a, a na m akpọ gị oku ka ị gaa n'ihu na -agụ akwụkwọ.
1 Ngwaọrụ achọrọ iji nwuo vidiyo
2 Ngwa efu iji kọwaa vidiyo
2.2 Editọ Video OpenShot (Windows / macOS / Linux)
Ngwaọrụ achọrọ iji nwuo vidiyo
Lee, anyị gosiri gị ngwa kachasị mma iji kọwaa vidiyo, mana nke mbụ, anyị ga -amatarịrị ihe bụ ngwaọrụ ga -enyere anyị aka ịrụ ọrụ a.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkọwa vidiyo, ihe mbụ ị ga -eme bụ gbanwee nchapụta vidiyo. Na -esote, anyị ga -agbanwerịrị ọdịiche ka nsonaazụ ya wee ghara ịdị egwu.
Ngwa ụfọdụ na -enye anyị nhọrọ Hụọ akpaka, nhọrọ nke na -arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ oge na anyị ga -etinyerịrị ya mgbe anyị gbanwechara nchapụta vidiyo ahụ.
Ọ bụrụ na nsonaazụ anyị amasịghị anyị ma ọ bụ na ọ dịchaghị mma, anyị nwere ike jiri ụdị nzacha ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ngwa ahụ na -enye anyị nhọrọ a, iji nye ya aka nke na -enye anyị ohere izochi ọchịchịrị vidiyo, ọ bụrụhaala na nsonaazụ anyị nwetara abụghị ihe anyị na -achọ.
Ngwa efu iji kọwaa vidiyo
Ngwa dị egwu kpamkpam nke anyị nwere ike iji ya dezie vidiyo ọ bụla Anyị na -ahụ ya na Avidemux, ngwa na -enyekwa anyị ohere mekọrịta ọdịyo na vidiyo.
Site na Avidemux, anyị enweghị ike naanị tinye ihe nzacha na vidiyo, n'etiti nke bụ ihe nzacha dị iche, mana na -enyekwa anyị ohere ibelata vidiyo ndị ahụ, bupụ ha n'ụdị ndị ọzọ, wepụ egwu ọdịyo ma ọ bụ tinye ndị ọhụrụ ...
Avidemux dị maka budata gị n'efu maka Windows na macOS na Linux site na njikọ a. A sụgharịrị ngwa ahụ n'asụsụ Spanish, yabụ asụsụ agaghị abụ nsogbu iji nweta ihe kachasị na ngwa ahụ.
Editọ Video OpenShot (Windows / macOS / Linux)
OpenShot bụ onye nchịkọta akụkọ vidiyo mepere emepe zuru oke zuru oke, nke amụrụ na 2008 maka Linux, mana taa ọ bụkwa Ọ na -enye anyị nsụgharị maka Windows na macOS.
Dịka ezigbo onye nchịkọta akụkọ vidiyo kwesịrị nnu ya, anyị nwere ike jiri OpenShot mee mgbanwe na nchapụta na iche na ya dokwuo anya videos, na mgbakwunye na ọrụ ndị bụ isi dị ka ịkpụ vidiyo ma ọ bụ ịgbakwunye egwu ọdịyo ka ọ bụrụ ọrụ zuru oke iji gbakwunye mmetụta dịka ihe nkiri 3D ...
OpenShot achọta ya sụgharịrị gaa na Spanish na asụsụ 7th ndị ọzọ na ọ bụ nhọrọ kachasị mma ịtụle dị ka ihe ọzọ maka ngwa zuru oke dịka Adobe Premiere, Final Cut ma ọ bụ Filmora.
Ngwa ọzọ dị egwu nke anyị nwere mgbe anyị na -agbanwe nchapụta na ọdịiche nke vidiyo bụ Onye nchịkọta akụkọ vidiyo VSDC, ngwa nke anyị nwere ike ibudata n'efu ma jiri ya na -enweghị oke (akara mmiri, mgbasa ozi, mgbasa ozi ...) na nke ahụ na -akpọ anyị oku ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ maka obere euro 5 site na ngalaba Enyemaka anyị.
Onye nchịkọta akụkọ vidiyo VSDC bụ nchịkọta akụkọ vidiyo na-abụghị linear (Ọ na -enye anyị ohere ịgbakwunye egwu vidiyo dị iche iche n'otu usoro iheomume), ọ dakọtara na ọtụtụ usoro vidiyo n'ahịa, ọ na -enye anyị ohere ịmepụta na ọkụ DVD na ihe okike anyị ...
A bịa na mbupụ ọdịnaya, anyị nwere ike ịme ya na 4K na HD mma, na mgbakwunye na -akwado usoro H.265 nke na -agbakọ nha faịlụ ikpeazụ nwere ọkara nke na -eji codec omenala H.264.
Hitfilm bụ otu n'ime nhọrọ efu nke anyị nwere mgbe ọ bịara gbanwee ọdịiche na nchapụta nke vidiyo ndị ahụ. Ngwa a dị maka nbudata n'efu, mana ọ na-enye anyị ohere ịgbasa ọnụ ọgụgụ ọrụ site na ịzụta ihe mgbakwunye n'onwe ya.
Agbanyeghị, iji dokwuo anya vidiyo, ọ dịghị mkpa ịzụta ihe ọ bụla nke ndị ọ na -enye anyị. Ọ bụrụ na mkpa gị bụ ịkọwa vidiyo na -adịghị mma mgbe ụfọdụ, HitFilm bụ ngwa dị mma ịtụle.
Agbanyeghị na ngwa a abụghị n'efu, ọ na -enye anyị ụdị nnwale nke na -ewebata akara mmiri na vidiyo anyị dezie. Ọ bụrụ na nke a abụghị nsogbu, anyị nwere ike iji ụdị ngwa a n'efu hichapụ vidiyo gbara ọchịchịrị anyị dekọrọ na mberede, gbakwunye mmetụta site na inye echiche anyị n'efu.
Filmora X bụ dị maka Windows 7 64-bit n'ihu yana maka macOS. Site na webụsaịtị ya, ọ na -enye anyị usoro nke mmasị nkuzi nke na -akụziri anyị ka anyị were nzọụkwụ mbụ anyị n'ime ụwa nke ndezi vidiyo.
iMovie bụ ngwa vidiyo efu nke Apple, ngwa dị maka ma iOS na macOS, n'agbanyeghị ụdị ọhụrụ a bụ naanị nke na -enye anyị ohere. gbanwee ma nchapụta na iche nke vidiyo. Iji jiri ngwa a, ọ dị naanị mkpa ịnweta akaụntụ Apple.
Ngwa a bụ onye nchịkọta akụkọ siri ike maka bido n'ụwa nke mbipụta akwụkwọ, na -enye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ maka Foto dị na ọrụ onyonyo, na -ewepu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ iji bulie vidiyo ma ọ bụ onyonyo ndabere ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Mmemme » Otu esi eji mmemme ndị a n'efu eme ka vidiyo na -enwu gbaa
Otu esi ejikọ ekwentị Xiaomi na PC
Top 12 NES Emulators maka Windows 10